Fibatana fonjam-by – «Afrique 2018»: nahazo medaly volamena 5 ny Malagasy | NewsMada
Fibatana fonjam-by – «Afrique 2018»: nahazo medaly volamena 5 ny Malagasy
Nanomboka ny alahady lasa teo, tatsy amin’ny kianja mitafo Youth Centre de Pointe-Jérome, atsy amin’ny Nosy Maorisy, ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, eo amin’ny fibatana fonjam-by. Tsara fanombohana ny Malagasy satria, efa nandrombaka medaly volamena dimy sy volafotsy iray, izy ireo teo amin’ny andro voalohan’ny fifaninanana.
Anisan’ireo nahazo izany, Andriantsitohaina Eric Herman, izay niambozona volamena 3, teo amin’ny sokajy latsaky ny 56 kg. Mbola nahazo volamena roa ihany koa Ravololoniaina Vania, teo amin’ny sokajy latsaky ny 63 kg, niampy medaly volafotsy iray. Ireo vokatra ireo, izay mahatafita azy mianadahy amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, hotanterahina any Turkmenistan, ny fiandohan’ny volana novambra ho avy izao.
Ankoatra azy ireo, mbola nisongadina ihany koa ilay Malagasy mizaka ny zom-pirenena Maorisianina, Ranaivosoa Roilya. Nahazo medaly volamena telo ihany koa ny tovovavy, tamin’ity. Anisan’ny nahazoany izany, ny teo amin’ny sokajy – 48 kg izay efa nanjakany tao anatin’ny telo farany. Tamin’ity, nifaninanana teo amin’ny sokajy – 53 kg ihany koa izy ary mbola nampisongadina azy.